တီဗီညစာ၏သမိုင်းနှင့်တီထွင်သူ Gerry သောမတ်စ်
1954 ခုနှစ်မှာ Gerry သောမတ်စ် Swanson တီဗီညစာစားပွဲ၏ထုတ်ကုန်နှင့်အမည်ဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးကိုတီထွင်
Gerry သောမတ်စ်သည် Swanson အစားအစာကုမ္ပဏီနှင့်အတူအရောင်းစာရေးနှစ်ခု Post-စစ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းမပြည့်စုံ 1954 Swanson တီဗီညစာအတွက် Swanson တီဗီညစာစားပွဲတီထွင်များအတွက်အကြွေးမလုပ်ပဲ: အချိန်-saving ခေတ်မီကရိယာများ၏မြှူပြီးကြီးထွားလာဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်အတူညှို့, ရုပ်မြင်သံကြား ။ Swanson တီဗီညစာစားပွဲကိုပထမဦးဆုံးစီးပွားဖြစ်အောင်မြင်သောခဲ့ကြသည် အေးစက်နေတဲ့မုန့်ညက် ။
ထက်ပို 10 သန်းတီဗီညစာစားပွဲ Swanson ရဲ့အမျိုးသားရေးဖြန့်ဖြူး၏ပထမတစ်နှစ်အတွင်းမှာရောင်းချခဲ့သည်။
ညစာနှုန်း $ .98 အဘို့, ဖောက်သည်များ Salisbury ကင်, meatloaf, ကြော်ကြက်သား, ဒါမှမဟုတ်ကြက်ဆင်အကြားကိုရွေးချယ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်, အာလူးများနှင့်တောက်ပအစိမ်းရောင်ပဲနှင့်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်; အထူးအချိုပွဲအကြာတွင်ဆက်ပြောသည်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးကို TV ညစာအတွက်အစားအစာအုပ်စုများတစ်ဦးကိုခှဲဝေသတ္တုဗန်းထဲမှာသေသပ်စွာခင်းကျင်းပြသပြီးအတွင်းအထိအပူခဲ့ကြသည် သမားရိုးကျမီးဖို ။
Swanson 1960 အတွက်ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများကနေ ", တီဗီညစာစားပွဲ" ဟုအဆိုပါအမည်အားဖယ်ရှားခဲ့သည်။ အဆိုပါ မစ္စတာကမ်းဘဲလ်ဟင်းချိုကုမ္ပဏီ ပလပ်စတစ်နှင့်အတူ Swanson အေးစက်နေတဲ့တီဗီညစာစားပွဲ၏လူမီနီယမ်ဗူးခွံအစားထိုး, 1986 ယနေ့တွင်အေးစက်နေတဲ့ညစာစားပွဲအတွက်မိုက်ခရိုဝေ့-လုံခြုံဗူးခွံ Stouffer ရဲ့, မာရီ Callender ရဲ့နှင့်ကျန်းမာရေးရွေးချယ်မှုအပါအဝင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, အမျိုးမျိုးကကမ်းလှမ်းနေကြသည်။
သမိုင်းထဲမှာ Down Going
1987 ခုနှစ်တွင်မူလတီဗီညစာစားပွဲဗန်းအမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းအတွက်တီဗီညစာ '' ရာအရပျပိတျထားသောအမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှုအပေါ်ဗန်းရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဂုဏ်ပြုဖို့ Smithsonian Institution မှထဲတွင်နေရာခဲ့သည်။ မင်္ဂလာပါ Doody ကနေနိုင်ငံတော်သမ္မတချိုမှ celebrity ကိန်းဂဏန်းများအဆိုပါညစာစားပွဲမွှမ်းတင်။
1999 ခုနှစ်တွင် Swanson Fame ၏ဟောလိဝုဒ်လမ်းလျှောက်အပေါ်တစ်ဦးကြယ်ပွင့်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
အထွတ်အထိပ်အစားအစာများကော်ပိုရေးရှင်း, 2001 ကတည်းက Swanson ထုတ်ကုန်များ၏လက်ရှိပိုင်ရှင်များ, မကြာသေးမီကတီဗီညစာငါးဆယ်နှစ်ပေါင်းကျင်းပခဲ့နှင့် Swanson တီဗီညစာနေဆဲရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အတူကြီးပြင်းသော 50s ၏ညစာသဘာဝအဖြစ်အများပြည်သူသြတ္တပ္ပစိတ်အတွက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
စက်မှုတော်လှန်ရေး မှစ. ရုပ်ပုံများ
အဆိုပါ Streetcar သမိုင်း - Cable ကိုကား
အဆိုပါ Truck ကားတီထွင်ဘယ်သူက: ကုန်ကားများ၏သမိုင်း?
Eleanor Roosevelt ရုစဗဲ့ရုပ်ပုံများ
Agnes ဖြစ်သူ Scott ကောလိပ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
ဝါကျ Connectors: ရေးသားအင်္ဂလိပ်ဖေါ်ပြသည်အတိုက်အခံ
နာမ်စကားစုများကိုဖွဲ့စည်းရန် '' Lo Que '' အသုံးပြုခြင်းမှတစ်ဦးကလမ်းညွှန်
အင်္ဂလိပ်စာလုံးပေါင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများမှနောဧကို Webster ရဲ့အစီအစဉ်
ကားသေ့ချြ - ထူထောင်သူ
Pomona ကောလိပ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
Triple H ကိုဓာတ်ပုံပြခန်း
Molodova ငါ (ယူကရိန်း)
Isabella Named မိဖုရား